नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल नियुक्त हुनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्ष रहलेका खनाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष पदमा १२ जनाको आवेदन परेकोमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ नेतृत्वको छनौट समितिले ३ जनाको...
फेसबुकमा यस्तो भाइरस ! छिर्यो, जनचेतनाका लागि सक्दो शेयर गरौ
फेसबुकमा तपाईको नामबाट एउटा भिडियो भाइसले सनसनी मच्चाइरहेको फेसबुकका प्रयोगकर्ताका फेसबुक पोष्टहरुबाट देखिन थालेको छ । त्यसैले तपाईको नामबाट आएको यो भिडियो मेसेन्जर, फेसबुकमा झुक्किएर पनि नखोलौं । यो खोल्नासाथ म्यासेन्जरमा प्रोब्लम आउने र फेसबूक ब्लक हुने भएको छ । तसर्थ सचेतनाको लागि सबैलाई यो जानकारी शेयर गरौ । Info...
यहाँ यस्तो प्रविधिको चर्चा हुँदैछ जसको मद्दतले तपाईं जहाँ जतिसुकै टाढा भए पनि आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाका गोप्य अंगहरु प्रेमपूर्वक स्पर्श गर्न सक्नु हुन्छ ।
होशियार रहौं ! फेसएप चलाउँदाको जोखिम यस्तो छ
तन्नेरीलाई बुढो देखाउने फेसएपको प्रयोग सेलिब्रटीलेसमेत गरेपछि नेपालमा यो भाइरल भएको हो । २०१७ मा एक रसियन कम्पनीले लञ्च गरेको यो एप्स त्यतिबेला भने खासै चर्चामा थिएन । तर, विश्व कप क्रिकेट सकिएपछि भारतीय क्रिकेट खेलाडीले यो एप्सको प्रयोग गरेर तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि नेपालमा पनि यो एप्स भाइरल...